एजेन्सी । धेरै मानिसलाइ खाना खाएपछी अल्छि लाग्छ र सकेसम्म सुत्ने चाहना राख्छन् । तर, खाना खानेबित्तिकै सुत्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन । खाने बित्तिकै सुत्ने गर्दा तपाईले खाएको खाना पाचन हुन सक्दैन र यसले शरिरमा बिकार पैदा गर्छ । साथै मोटोपन पनि बढ्ने गर्छ ।
हरियो धनियाँ खानुका फाइदा
एजेन्सी । धनियाँले पेटमा रहेको वायूलाई पनि फ्याक्ने काममा मद्धत गर्छ । साथै पाचनशक्ति पनि बढाउँछ । धनियाको हरियो पात पित्त नाशक पनि हुन्छ । पित्त या कफले सताएमा दुई चम्चा धनियाँको हरियो पातको रस खाने गरे फाइदा गर्छ ।
वास्तुशास्त्रः घरमा किन लगाउने मनी प्लान्ट ?
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रमा आज मनी प्लान्टको बिरुवाको बारेमा जान्नुहोस्। घरको सजावटका लागि धेरै रुखहरू लगाइन्छ, तर केही रुख र बिरुवाहरू घरको सजावटका साथै घरमा सुख र समृद्धिको लागि पनि राम्रो हुन्छन्।
के तपाईकाे पनि कपाल झर्ने समस्या छ ? आजदेखि यी गल्ती नगर्नुहोस्
एजेन्सी । कपाल झर्नु एक यस्तो समस्या हो जसले महिला होस् या पुरुष जो कोहीलाई चिन्तित बनाउँछ । कपाल हाम्रो सुन्दरता र व्यक्तित्वको एक हिस्सा हो। कपालको स्वास्थ्य हाम्रो जीवनशैलीमा पनि भर पर्छ । यदि तपाई स्वस्थ खाना खानुहुन्छ, कपालमा तेल लगाउनु हुन्छ र तपाईको कपाल झरिरहेको छ भने, तपाई सायद यी गल्तीहरू गर्नुहुन्छ। किन तपाईको कपाल कमजोर हुन थालेको छ, कारणहरु जान्न आवश्यक हुन्छ ।
यस्ता फूल घरमा नराख्नुस्, नोक्सान हुन सक्छ: वास्तुशास्त्र
एजेन्सी । आज वास्तुशास्त्रमा आचार्य इन्दु प्रकाशबाट फूलहरूको बारेमा जान्नुहोस्। यद्यपि घर, अफिस वा अन्य कुनै ठाउँमा फूल राख्नु राम्रो मानिन्छ र त्यसैले धेरैले आफ्नो घर वा अफिसमा पनि फूल रोप्छन्, तर यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। मानिसहरूले बिरुवा किन्छन् तर राम्रोसँग हेरचाह गर्न सक्दैनन् र तिनीहरू ओइलाउँछन् वा बिग्रन्छन्, तिनीहरूका पातहरू कालो हुन्छन्।